तनहुमा पहीरोमा पुरीएर बाचेकी आमाले के भनिन ! हेर्दा हेर्दै पहीरो खसेर आमा र नाति पुरेपछि !! (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar28media
तनहुमा पहीरोमा पुरीएर बाचेकी आमाले के भनिन ! हेर्दा हेर्दै पहीरो खसेर आमा र नाति पुरेपछि !! (भिडियो हेर्नुस्)
July 4, 2021 - by Vikash - LeaveaComment
तनहुमा पहीरोमा पुरीएर बाचेकी आमाले के भनिन ! हेर्दा हेर्दै पहीरो खसेर आमा र नाति पुरेपछि (भिडियो) भिडियो अन्तिममा छ नछुटाइ हेर्नुहोला !!
ज्वानोको सेवन बिहान खाली पेटमा गर्न सकिन्छ । मनतातो पानीसँग ज्वानो खाँदा सजिल्यै यसको बानी पार्न सहज हुन्छ । यसका लागि २५ ग्राम ज्वानोलाई एक गिलास पानीमा पूरै रात भिजाउने र बिहान त्यो पानी पिउने गर्नुपर्छ ।
लगातार २० दिनसम्म ज्वानो पानी पिउँदा केही दिनमा नै यसको प्रभावकारिता देखिन सुरु हुन्छ । हेर्नुहोस यसका फाइदाहरु :
Previous Article कस्तो होला यो साता तपाईको भाग्य ? निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् साप्ताहिक राशिफल
Next Article शुक्र ग्रह कर्कट राशिमा प्रवेश: साउन २ गतेसम्म १२ ओटै राशिमा पर्नेछ यति धेरै असर र लाभ !